တန်ဇန်းနီးယားနယ် - အင်ဒိုနီးရှားခါးပတ်ပေါ်ကို
တန်ဇန်းနီးယားနယ်>>မျက်နှာပြင်ကြှေးမှေးပြီးတော့တုန်ခါအင်ဒိုနီးရှားရှိ >> ခါးပတ်ပေါ်ကို
ကနေဆောင်းပါး: မျက်နှာပြင်ကြှေးမှေးပြီးတော့တုန်ခါ | အချိန်: ဧပြီလ 5, 2013 | tag:မျက်နှာပြင်ကြှေးမှေးပြီးတော့တုန်ခါ	|
အင်ဒိုနီးရှားရှိခါးပတ်ပေါ်ကိုရှန်ဟိုင်း XSM တဲ့ professional သတ္တုရိုင်းနယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, အင်ဒိုနီးရှားထဲမှာခါးပတ်ပေါ်ကို, စက်မှုအကျိုးရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများ, သတ္တုရိုင်းကြိတ်စက်ကိရိယာများ manufacturers.Ore သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်, ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ခါးပတ်ပေါ်ကို, တုန်ခါလမ်းခွဲအဆိုပါစေလွှတ်ပေါ်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများသတ္တုရိုင်း မေးရိုးနယ်, သက်ရောက်မှုနယ်, ဟိုက်ဒရောလစ်နယ် တစ်ဦးကိုနှိမ်နင်းကုန်ကြမ်းသတ္တုရိုင်းသည်, တစ်ဦးတို့ကဒုတိယ သေးငယ်တဲ့ jawcrusher, တူနယ် တို့ကသတ္တုရိုင်းအလယ်တန်းကိုနှိမ်နင်းတတိယစိစစ် တုန်ခါမျက်နှာပြင် ဖြည့်ဆည်းသည့်သတ္တုရိုင်း၏စံသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ပို့ဆောင်နေသည် ဘောလုံးကိုကြိတ်, ultrafine ကြိတ် တို့ကသတ္တုရိုင်းတတိယအဆင့်ကုသမှု သံလိုက်ထည့်ထား, flotationmineral စက် needs.Of သင်တန်းအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်, ဒီရုံယေဘုယျသတ္တုရိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရှန်ဟိုင်း XSM သတ္တုရိုင်းသင့်ရဲ့ type ကိုအကောင်းဆုံးသင်သည်ကိုက်ညီသောသင်သည်ငါ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အခြေခံပြီး, သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျနော်တို့ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်နှိပ်ပါကြိုဆိုကြသည် မျဉ်းအိုင်ကွန်၏ဘေးထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသငျသညျအသေးစိတျအဖြေ willgive ။
အပေါများသတ္တုဓာတ်နှင့်အတူ, အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးကြောင့်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိခါးပတ်ပေါ်ကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အဆိုပါလြားစကျခါးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအဆင့်မြင့်နဲ့ရိုးရိုးနေသောစံအစိတ်အပိုင်းများ, ထားရှိရေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏တုန်ခါကိရိယာများစာရေးကိရိယာနှင့်မိုဘိုင်းကြိတ်ခွဲအပင်များအတွက်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကကျယ်ပြန့်သဲသို့မဟုတ်စိမ်းပစ္စည်းများ, သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းရန်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း, သတ္တုနှင့်ကျောက်မီးသွေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ မတူညီတဲ့လွှဲပြောင်းပစ္စည်းကိရိယာများအဆိုအရ, လွှဲပြောင်းစနစ်ကတဦးတည်းလွတ်လပ်စွာသို့မဟုတ် Multi-လြားစကျခါးသို့မဟုတ်အခြားအပြောင်းအရွှေ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်အဆိုပါခါးပတ်လြားစကျခါး -20 ℃ထံမှ + 40 ℃အထိအပူချိန်အခြေအနေ၌လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီခါးပတ်ပေါ်ကိုအားဖြင့်လွှဲပြောင်းပစ္စည်း၏အပူချိန်ကိုအောက်ပါအတိုင်း SJLC ကထုတ်လုပ်သည့်ခါးပတ်၏ 50 ℃နေဖြင့်အမျိုးအစားများထက်နိမ့်ဖြစ်သင့်သည်:
ယာဉ်မောင်း Method ကို ချ. ဝေဖန်:
STD-စက်မှု Drive ကို: ဒါဟာသိသိ (ပြင်ပမော်တာနှင့်အတူ) pinwheel လျှော့ချခြင်းနှင့်ကွင်းဆက်-drive ကိုယန္တရားအားဖြင့်မောင်းနှင်ရဲ့;
STDJ Ⅱစက်မှု Drive ကိုစီးရီး။ ဒါဟာထောက်-Down နှင့်ခါးပတ်-drive ကိုယန္တရားချမှတ်;
STD-လျှပ်စစ်ရဟတ် Drive ကိုစီးရီးဒါဟာလျှပ်စစ်ရဟတ်မောင်းနှင်ပါတယ်။
စီးရီး Fixed: ဒါဟာတိုက်ရိုက်အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားရဲ့;
structures များ ချ. ဝေဖန်:
လြားစကျခါးနှစ်မျိုး, မပါဘဲအခြားနေချိန်မှာနေသောလူသွားလမ်းပြုပြင်တပ်ဆင်ထားတဦးတည်းရှိပါတယ်။ စက်မိန့်သောအခါ, ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ကြားချက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ခါးပတ်အကျယ် (မီလီမီတာ) ခါးပတ်အလျား (ဍ) / ပါဝါ (KW) ခါးပတ်မြန်နှုန်း (ဍ / S) ကို စွမ်းဆောင်ရည် (t / h)
ရှန်ဟိုင်းကုမ္ပဏီကမ္ဘာတဝှမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခါးပတ်ပေါ်ကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအင်ဒိုနီးရှားထဲမှာခါးပတ်ပေါ်ကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောအအခန်းကဏ္ဍအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အပြင်, ထောက်ထားစာနာဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းအပေါငျးတို့သဖောက်သည်ကမ်းလှမ်းနေသည်။ အမြဲသင်ပထမဦးဆုံးကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်သင်တို့ရှေ့စောင့်ရှောက်။